Jurgen Klopp Oo Go'aan Buuxa Ka Gaadhay Xidig Kooxdiisa Kowaad Ka Tirsan Oo Dalabyo Ka Helay AS Roma Iyo Sevilla - Gool24.Net
Jurgen Klopp Oo Go’aan Buuxa Ka Gaadhay Xidig Kooxdiisa Kowaad Ka Tirsan Oo Dalabyo Ka Helay AS Roma Iyo Sevilla
January 21, 2020 Mahamoud Batalaale
Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa go’aan ku gaadhay in kooxaha Sevilla iyo AS Roma aan laga qablin dalabo ay ka soo gudbiyeen xidiga aan fursada badan Anfield ku haysan ee Xherdan Shaqiri.
Xherdan Shaqiri ayaa la filayay in suuqii xagaagii la soo dhaafay uu ka baxayo Anfield laakiin waxa uu baaqi ku sii ahaaday Liverpool inkasta oo aanu helin fursadii uu xataa xili ciyaareedkii hore helay sababo la xidhiidha dhaawac soo gaadhay iyo qaab ciyaareedka fiican ee Mane, Salah iyo Firmino.
Kooxda AS Roma oo ay Liverpool hore uga soo qaadatay goolhaye Alisson Becker iyo Mohamed Salah ayaa dalab ka soo gudbisay Xherdan Shaqiri laakiin Jurgen Klopp iyo maamulka Anfield ayaan dalabkan wax xiiso ah u muujin.
Waxa kale oo Xherdan Shaqiri doonaysa kooxda horyaalka La Liga ee Sevilla waxayna markale Liverpool iska diiday dalabka uu Shaqiri ku tagi kari lahaa horyaalka Spain.
Wariyaha caanka ah ee James Pearce oo si khaas ah uga warama Liverpool ayaa shaaciyay go’aanka ay Reds ka gaadhay xiisaha AS Roma iyo Sevilla ee Xherdan Shaqiri.
Wariye James Pearce ayaa xaqiijiyay in kooxaha AS Roma iyo Sevilla ay dalabyo heshiis amaah ah u soo gudbiyeen Liverpool si ay u helaan adeega Shaqiri balse waxa uu cadeeyay in Liverpool ay doonayso sidii ay 30 milyan gini xidigan ugu iibin lahayd dhamaadka xili ciyaareedkan marka uu suuqa xagaagu furmo.
Liverpool ayaa qiimo aad u hooseeya Shaqiri ku heshay markii ay kooxdiisii hore ee Stoke City ay heerka labaad u dhacday waxayna Reds iska diiday in Shaqiri uu suuqa bishan January amaah ku baxo si ay taas badalkeeda suuqa xagaaga lacag fiican ugu iibin karaan.
Shaqiri laftiisa ayaan waqti xaadirkan la filayn in uu xiisaynayo in uu Liverpool ka baxo maadaama oo uu doonayo in uu qaato bilada koobka Premier League ee ay kooxdiisa Reds qarka u saaran tahay si uu uga mid noqdo kooxda Reds ee la filayo in koobka Premier league loo caleemo saari doono.